Faritra sofia :: Adiny folo no hamitana ny lalana Bealanana-Antsohihy • AoRaha
Faritra sofia Adiny folo no hamitana ny lalana Bealanana-Antsohihy
Mampikaikaika ny maro ny faharatsian-dalana amin’iny Faritra Sofia iny. Miainga avy eo Antsohihy mihazo amin’ny distrikan’i Mandritsara, Bealanana, Befandriana Avaratra. Toy izany ihany koa ny any amin’ny Faritra Sava, toa an’i Vohemar sy Ambilobe.
Ora valo hatramin’ny ora folo no hamitana ny lalana mirefy 120 km, izay mampitohy an’i Bealanana sy Antsohihy amin’izao fotoana izao. Miaina izany fijaliana izany hatrany ireo mpandeha sy ny mpamily mampiasa iny lalana iny isaky ny fotoam-pahavaratra toy izao. “Efa niainanay mpamily efa hatramin’ny ela io lalana ratsy io saingy mbola tsy nisy fanamboarana azy
hatramin’izay. Lany eny an-dalana ny fotoana. Tena efa miharatsy hatrany anefa ny lalana ka miteraka fahasimban’ny fiara izany”, hoy ny fitarainan’ny mpamily.
Tsy mandeha amin’io lalana io intsony ny fiara lehibe fa ireo fiara tsy mataho-dalana ihany sisa no afaka manao ny asa fitaterana. Etsy an-kilany tafakatra 25 000 hatramin’ny 30 000 ariary ny saran-dalana ho an’ny olona iray raha 15 000 ariary izany rehefa main-tany. Miantso ny tompon’andrai­kitra mba hijery akaiky sy hanarina an’ireo lalana ireo ny mponina any an-toerana
fa tena mijaly sy lany vola ary lany fotoana ny mpandeha.
Fifidianana filohan’ny oniversite
Fahasalamana :: Fanafody iray taonina hozaraina any Antsirabe